मानिसहरू किन यो स्टाइलिश नयाँ स्मार्टवाच खरिद गर्न हतारिरहेका छन्? स्व – Brother-mart
मानिसहरू किन यो स्टाइलिश नयाँ स्मार्टवाच खरिद गर्न हतारिरहेका छन्? स्वास्थ्य लाभहरू अविश्वसनीय छन्
अर्डर गर्न को लागी ﻿9801877856 मा कल गर्नुहोस्
Order गर्न तलको हरियो Buy Now Button थिच्नुहोस
धेरै जसो स्मार्टफोनलाई माया गर्ने जनसंख्याले स्मार्टवाचहरू पनि मन पराउँछन्। र राम्रो कारणको साथ - हृदयको दर र रक्तचाप निगरानी गर्न को लागी क्यालोरी मापन गर्न पाईलाहरू मापन गर्न, तिनीहरूसँग केही साँच्चै उत्कृष्ट फाइदाहरू छन्। तर एउटा समूहले स्मार्टवाचहरूको प्रयोग गर्न र फाइदा लिन ढिलो भएको छ - जेष्ठ नागरिकहरू। र कारणहरू स्पष्ट छन्: तिनीहरू प्रयोग गर्न गाह्रो थिए, र तिनीहरू धेरै महँगो थिए। अब चिन्ता लिनु पर्दैन।
यसैले हामीले एउटा स्मार्टवाच ZEBLAZE GTS2ल्याएका छौँ जसले प्रयोग गर्न-सजिलो इन्टरफेस र कम मूल्यको साथ तपाईले गर्न चाहेको सबै कुरा गर्दछ।
GTS2लाई भेट्नुहोस्– सही मूल्यमा यो सबै गर्ने स्मार्टवाच
GTS2एउटा स्मार्टवाच हो जसले धेरै मानिसहरूको लागि स्मार्टवाच भन्दा पनि डाकटर को काम गर्दछ: यसले फोन कलहरू लिन्छ, पायिलाहरू मापन गर्छ, सन्देशहरू अलर्टहरू, र थप कुराहरू गर्दछ।तर इमानदारीपूर्वक भन्नु पर्दा, यो स्वास्थ्य सुविधाहरू हो जसले यो SMARTWATCH लाई हिट बनाएको छ, विशेष गरी जेष्ठहरूका लागि। स्वास्थ्य सुविधाहरू जस्तै:
स्वास्थ्य र हृदय निगरानी - रक्तचाप, हृदय गति, रगत अक्सिजन र प्रति मिनेट (BPM)। सबै वास्तविक समयमा!
निद्रा निगरानी - हेर्नुहोस् तपाईं कति राम्रो सुत्दै हुनुहुन्छ।
क्यालोरी निगरानी (यो गम्भीर रूपमा उपयोगी छ)।
फिटनेस ट्र्याकिङ - आफ्नो workouts रेकर्ड र तिनीहरूलाई तुलना गर्नुहोस्।
र अवश्य पनि, यसले पाईला मापन गर्नेछ।
GTS2को रहस्य घडीको पछाडि लेजर हो। यसले मुटुको धड्कन, बीपी, र थप जस्ता तपाईंको महत्त्वपूर्ण संकेतहरू निगरानी गर्दछ। यो तपाईसँग 24/7 डाक्टर भएको जस्तै हो।
यी स्वास्थ्य सुविधाहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
तपाईको मुटुको दर, रक्तचाप, रगतको अक्सिजन स्तर, र यस्तै प्रकारका फाइदाहरू बुझ्नको लागि तपाई रकेट वैज्ञानिक हुनुपर्दैन।
यो सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर यो विशेष गरी जेष्ठहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। हृदय रोग नेपाल होस् वा विश्वव्यापी मृत्युको प्रमुख कारण हो, र 50 भन्दा माथिका मानिसहरू विशेष गरी कमजोर छन्।
यसलाई "द साइलेन्ट किलर" भनिन्छ किनभने यसमा प्रायः ढिलो नभएसम्म डरलाग्दो लक्षणहरू हुँदैनन्, तर यसले धेरै सुरागहरू छोड्छ - काइनेटिक प्रो वाचले मनिटर गर्ने कुराहरू।
यसबाहेक, नियमित व्यायाम, राम्रो निद्रा, चरणहरू गणना ... यी सबै राम्रो स्वास्थ्यको लागि नेतृत्व गर्न सक्छन्। कुनै आश्चर्य छैन कि जेष्ठ नागरिक यो घडीलाई माया गरिरहेका छन्।
किन्न लाई यहाँ थिच्नुस
GTS2वाचमा के अन्य सुविधाहरू छन्?
ठुलो रङ १.६९” HD डिस्प्ले र टचस्क्रिन, अद्भुत आइकनहरू सहित। यो पढ्न र बुझ्न आश्चर्यजनक रूपमा सजिलो छ।
IP6/7 वाटरप्रूफ (यसलाई नुहाउँदा लगाउनुहोस् वा पौडी खेल्नुहोस्।)
स्क्र्याच र प्रभाव प्रतिरोधी
दुबै आईफोन (आईओएस) र एन्ड्रोइड फोनहरूमा सिन्च।
कलहरूको जवाफ दिनुहोस्, सन्देशहरू पठाउनुहोस्, इत्यादि।
अलर्ट र अलार्म (फेरि कहिल्यै भेटघाट नछुटाउनुहोस्)
स्लीप मोनिटरिङ (तपाईले कति आरईएम स्लीप पाउँदै हुनुहुन्छ?)
स्मार्ट फिटनेस रिमाइन्डर (हे तपाई, तपाई धेरै लामो बसिरहनु भएको छ!)
फोन खोजकर्ता (तपाईंको घडीबाट आफ्नो फोन कल गर्नुहोस्। अद्भुत!)
फोटो खिच्नुहोस् (तपाईँको फोन सेटअप गर्नुहोस्, र तस्वीर खिच्नको लागि आफ्नो घडी प्रयोग गर्नुहोस्।)
हार्ट मनिटर (वास्तविक समय रक्तचाप, हृदय गति, रगत अक्सिजन। र बीपीएम)
अत्यधिक लामो ब्याट्री जीवन
अहिले सम्मकै प्रयोग गर्न सजिलो स्मार्टवाच
ओह, र यो राम्रो पनि देखिन्छ
ठीक छ, तर कति पर्छ?
स्मार्टवाचहरू $5बिलियन डलरको उद्योग हो। त्यो किनभने धेरैजसो स्मार्ट घडीहरू सयौं डलरका हुन्छन्। तर तिनीहरू किन यति महँगो छन्? दुई कारण:
ठूला टेक कम्पनी खर्च र तलबहरू (उनीहरूको स्वामित्वमा रहेका अरबपतिहरू सहित)।
जनताले यसको लागि तिर्नेछन्। विशेष गरी मानिसहरू जसलाई यो सुविधाहरू बारे थाहा छ |
तर GTS2को टेक स्टार्टअपले स्मार्ट इन्जिनियरहरूको साथ आविष्कार गरेको थियो, तर कुनै अरबपतिहरू छैनन्। र तिनीहरूले स्मार्टवाच उद्योगलाई उल्टो गर्न GTS2बजार मा ल्याए |
कसरी? यसलाई एक हास्यास्पद रु 5,499 only/- मा बेचेर (उनीहरूको 50% छुट प्रोमोको लागि धन्यवाद, जुन विस्तार गरिएको थियो - राम्रो कुरा तपाईंले आज यो पढ्नुभयो, हैन त?)
सहि पढ्नु भो | मूल्य रु २०,००० पनि होइन। रु १५००० होइन। रु १०,००० पनि होइन, रु ६००० पनि हैन |
अरूले के भन्छन एस बारेमा ?